ESI WEPU OKU SITE NA IPHONE - IOS - 2019
Esi wepu oku site na iPhone
Ogologo oge gara aga, onye ọ bụla nọ na kọntaktị na kaadị SIM ma ọ bụ na ebe nchekwa ekwentị, na ederede kacha mkpa ka edere ya na pen na ederede. Enweghị ike ịchọta nhọrọ ndị a maka ịchekwa ozi enwere ike ịdabere na ya, mgbe niile, na "Sims", na ekwentị anaghị adị ebighi ebi. Ọzọkwa, ugbu a na iji ha maka nzube dị otú ahụ, ọ dịghị mkpa ọ bụla, ebe ọ bụ na ihe ọmụma niile dị mkpa, tinyere ọdịnaya nke akwụkwọ adreesị, nwere ike ịchekwa na igwe ojii. Ngwọta kachasị mma na nke kachasị mfe bụ akaụntụ Google.
Nbubata mbubata na akaụntụ Google
Mkpa ịbubata kọntaktị site na ebe ndị nwe Android-smartphones na-echekarị, ma ọ bụghị naanị ha. Ọ bụ na ngwaọrụ ndị a na akaụntụ Google bụ isi. Ọ bụrụ na ị zụrụ ngwaọrụ ọhụrụ ma chọọ ịnyefe ọdịnaya nke akwụkwọ adreesị gị site na ekwentị na-aga n'ihu na ya, isiokwu a bụ maka gị. N'ile anya n'ihu, anyị nwere ike ịhụ na ọ ga-ekwe omume ibubata ọ bụghị naanị ntinye na kaadị SIM, kamakwa kọntaktị site na ozi ọ bụla, a ga-atụlekwa nke a n'okpuru.
Ihe dị mkpa: Ọ bụrụ na echekwara nọmba ekwentị na ngwaọrụ mkpanaka ochie na ebe nchekwa ya, ha ga-ebu ụzọ ebuga na kaadị SIM.
Nhọrọ 1: Ngwaọrụ Ngwá Ọrụ
Ya mere, ọ bụrụ na ịnwe kaadị SIM na nọmba ekwentị echekwara na ya, ị nwere ike ịbubata ha na akaụntụ Google gị, wee banye n'ime ekwentị n'onwe ya, na-eji ngwaọrụ ndị arụnyere arụ ọrụ arụmọrụ.
Ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ịmalite ịmepụta ọrụ ahụ n'ihu anyị site na smartphones na-agba arụmọrụ usoroọrụ nke "Corporation of Good" nwere.
Rịba ama: A kọwaara ntụziaka dị n'okpuru ebe a ma gosi na ihe atụ nke "dị ọcha" Android 8.0 (Oreo). Na nsụgharị ndị ọzọ nke sistemụ arụmọrụ a, yana na ngwaọrụ nwere mkpịsị ndị ọzọ nke atọ, interface na aha ụfọdụ ihe nwere ike ịdị iche. Ma ihe omuma na usoro omume ga-adi ka ihe ndia.
N'elu ihuenyo nke ama ma ọ bụ na nchịkọta ya, chọta akara ngosi nke ngwa ngwa "Ndi ana-akpo" ma mepee ya.
Gaa na menu site na ịpị na bọtịnụ atọ dị na nkuku aka ekpe ma ọ bụ na-eme swipe n'aka ekpe gaa n'aka nri na ihuenyo ahụ.
Na ọnụọgụ nke ga-emepe, gaa "Ntọala".
Pịgharịa gaa na ala, chọta ma họrọ ihe dị na ya. "Bubata".
Na window windo, kpatụ aha kaadi SIM gị (site na ndabara, aha onye ọrụ mkpanaka ma ọ bụ ndapụta site na ya ga-egosi). Ọ bụrụ na ị nwere kaadị abụọ, họrọ otu nke nwere ozi dị mkpa.
Ị ga-ahụ ndepụta nke kọntaktị echekwara na ebe nchekwa SIM. Site na ndabara, ha niile ga-akara. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbubata naanị ụfọdụ n'ime ha ma ọ bụ wepu ihe ndị na-adịghị mkpa, nanị kpochapụ igbe dị na nri nke ihe ndenye ndị ị na-adịghị mkpa.
Mgbe ị na-ahọrọ kọntaktị ndị dị mkpa, pịa bọtịnụ dị n'akụkụ aka nri aka nri. "Bubata".
Ịnye ọdịnaya nke akwụkwọ adreesị gị site na kaadị SIM gaa na akaụntụ Google ga-arụ ozugbo. Na mpaghara ngwa ngwa "Ndi ana-akpo" Ihe ngosi ga-egosi banyere ọtụtụ edere edere. Otu akọrọ ga-apụta n'akụkụ aka ekpe nke panel ngosi, nke gosipụtakwa mmezu nke ịrụ ọrụ mbubata.
Ugbu a, a ga-echekwa ozi a niile na akaụntụ gị.
Ị nwere ike ịnweta ha site na ngwaọrụ ọ bụla, dị nnọọ abanye na akaụntụ gị, na-akọwa ozi Gmail na paswọọdụ gị.
N'otu oge ahụ, ọ bụrụ na ị na-eji ngwaọrụ mkpanaka dabere na sistemụ arụmọrụ Apple, usoro nke omume ịchọrọ ịrụ iji bubata akwụkwọ adreesị site na kaadị SIM ga-adịtụ iche. Ị ga-ebu ụzọ tinye akaụntụ Google gị na iPhone, ma ọ bụrụ na i mebeghị nke a tupu.
Meghee "Ntọala"gaa na ngalaba "Akaụntụ"họrọ "Google".
Tinye data ikike (nbanye / email na paswọọdụ) site na akaụntụ Google gị.
Mgbe agbakwunyere akaụntụ Google, gaa na ngalaba na ntọala ngwaọrụ "Ndi ana-akpo".
Kpatụ na ala aka nri "Bubata ndi ana-akpo SIM".
Obere windo nwere ike igosi na ihuenyo, nke ị ga-achọ ịhọrọ ihe ahụ "Gmail"mgbe nke a gasịrị, a ga-echekwa nọmba ekwentị site na kaadị SIM na akpaghị aka na akaụntụ Google gị.
Dịka nke ahụ, ị ​​nwere ike ịchekwa kọntaktị site na Sims na akaụntụ Google gị. A na-eme ihe nile ngwa ngwa, ma nke kachasị mkpa, ọ na-eme ka nchebe nchekwa nke data dị mkpa dị mkpa ma nye ikike iji nweta ha site na ngwaọrụ ọ bụla.
Nhọrọ 2: Email
Ị nwere ike mbubata ọ bụghị naanị nọmba ekwentị na aha njirimara ndị dị na akwụkwọ adreesị kaadị SIM gị, kamakwa kọntaktị email n'ime akaụntụ Goole. Ọ dị ịrịba ama na usoro a na-enye ọtụtụ nhọrọ maka mbubata. Ihe a na-akpọ isi mmalite data nwere ike ịbụ:
Ọrụ ozi nzipu ozi ala ọzọ;
Ihe karịrị mmadụ 200 ọzọ;
CSV ma ọ bụ faịlụ vCard.
Enwere ike ime ihe a niile na kọmputa, ma ngwaọrụ ndị na-akwado ngwaọrụ nke ikpeazụ. Ka anyị kọọ ihe niile iji mee.
Gaa na gmail
Na ịpị na njikọ dị n'elu, ị ga-ahụ onwe gị na ibe gị Google Mail. Pịa na akara Gmail na ekpe aka ekpe. Site na ndetu ndepụta, họrọ "Ndi ana-akpo".
Na peeji na-esote gaa na isi menu. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ dị n'ụdị oghere atọ dị na nkuku aka ekpe.
Na menu na-emepe, pịa ihe "More"iji kpughea ọdịnaya ya, ma họrọ "Bubata".
Window ga-apụta na-egosipụta nhọrọ nke nhọrọ nhọrọ mbubata. Ihe nke ọ bụla n'ime ha pụtara na ekwugoro n'elu. Dịka ọmụmaatụ, anyị buru ụzọ tụlee paragraf nke abụọ, ebe ọ bụ na ọrụ mbụ na otu ụkpụrụ ahụ.
Mgbe ịhọrọ ihe ahụ "Bubata site na ọrụ ọzọ" Ị ga-abanye nbanye na paswọọdụ nke akaụntụ mail ahụ nke ịchọrọ ịdekọrịta kọntaktsị na Google. Wee pịa bọtịnụ ahụ "Ana m anabata okwu ahụ".
Ozugbo nke a gasịrị, usoro nke ịbịnye kọntaktị site na ozi ozi ị kwuru ga-amalite, nke ga-ewe obere oge.
Mgbe ị kwusịrị, a ga-ebute gị gaa na ihuenyo kọntaktị Google, ebe ị ga-ahụ ihe niile agbakwunyere.
Ugbu a, tụlee mbubata kọntaktị na Google sitere na CSV ma ọ bụ faịlụ vCard, nke ị ga-ebu ụzọ mee. Na ozi ọ bụla na mail, algorithm maka ime usoro a nwere ike ịdịtụ iche, ma n'ozuzu, nzọụkwụ niile yiri nke ahụ. Tụlee ihe ndị dị mkpa iji mee ihe atụ nke ozi Outlook nke Microsoft nwere.
Gaa na igbe akwụkwọ ozi gị ma chọọ ngalaba n'ebe ahụ "Ndi ana-akpo". Banye n'ime ya.
Chọta ngalaba "Management" (nhọrọ nwere ike ime: "Di elu", "More") ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ ma meeghe ya.
Họrọ ihe "Mbupụ Ndị Kọntaktị".
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, kpebie ihe kọntaktị a ga-ebupụ (niile ma ọ bụ họrọ), ma lelee usoro nke faịlụ data mmepụta - CSV dị mma maka nzube anyị.
A ga-ebudata faịlụ ahụ na ozi kọntaktị echekwara ya na kọmputa gị. Ugbu a, ị ga-alaghachi na Gmail.
Tinyegharịa nzọụkwụ 1-3 site ntụziaka gara aga wee họrọ ihe ikpeazụ n'ime window nhọrọ nke nhọrọ dịnụ - "Bubata si CSV ma ọ bụ faịlụ vCard". A ga-akpali gị ka ị gbanwee gaa na nsụgharị ochie nke kọntaktị Google. Nke a bụ ihe dị mkpa, n'ihi ya ọ dị mkpa ka ị pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Na Gmail menu na ekpe, họrọ "Bubata".
Na windo na-esote, pịa "Họrọ faịlụ".
Na Windows Explorer, gaa na folda na faịlụ nke kọntaktị na-ebupụ ma budata, pịa ya na bọtịnụ òké aka ekpe ịhọrọ na pịa "Meghee".
Pịa bọtịnụ ahụ "Bubata" iji mezue usoro nke na-ebufe data na akaụntụ Google.
A ga-echekwa ozi sitere na faịlụ CSV na ozi Gmail gị.
Dịka e kwuru n'elu, ị nwere ike mbubata kọntaktị site na ozi ndị ọzọ nke ozi na akaụntụ Google gị site na ama gị. N'eziokwu, enwere obere nuance - a ga-echekwa akwụkwọ adreesị na faịlụ VCF. Ụfọdụ ndị na-ere ahịa (ma ọ bụ weebụsaịtị ma mmemme) na-enye gị ohere ịbupu data na faịlụ na mgbati a, ya mere, họrọ ya na nzoputa nzọpụta.
Ọ bụrụ na ọrụ ozi-e ị na-eji, dị ka Microsoft Outlook anyị tụlere, anaghị enye nhọrọ a, anyị na-akwado ịgbanwe ya. Ihe edere na njikọ dị n'okpuru ga-enyere gị aka na ọrụ a.
Gụkwuo: Gbanwee faịlụ CSV na VCF
Ya mere, ebe ị natara faịlụ VCF na akwụkwọ ndekọ akwụkwọ, mee ihe ndị a:
Jikọọ smartphone gị na kọmputa gị site na eriri USB. Ọ bụrụ na ihuenyo na-egosi na ihuenyo ngwaọrụ, pịa "OK".
Ọ bụrụ na arịrịọ dị otú ahụ adịghị apụta, gbanwee site na ọnọdụ nkwụsị Nnyefe Njikwa. Ị nwere ike mepee windo nhọrọ ahụ site na iweda ákwà mgbochi ahụ ma tinye ihe ahụ "Na-agbanye ngwaọrụ a".
Iji onye nyochaa arụmọrụ, detuo faịlụ VCF na mgbọrọgwụ nke ngwaọrụ mkpanaka gị. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike mepee nchekwa ndị dị mkpa na windo dị iche iche wee dọrọ faịlụ site n'otu windo gaa na ọzọ, dịka e gosiri na foto dị n'okpuru ebe a.
Mgbe ịmechara nke a, kwụpụ ama si na kọmpụta ma mepee ngwa ngwa na ya. "Ndi ana-akpo". Gaa na menu site na igipụ ihuenyo site n'aka ekpe gaa n'aka nri, wee họrọ "Ntọala".
Pịgharịa gaa na ndepụta nke ngalaba dịnụ, kpatụ ihe "Bubata".
Na windo na-egosi, họrọ ihe mbụ - "VCF faịlụ".
Onye njikwa faịlụ (ma ọ bụ jiri mee ihe) ga-emeghe. Ị nwere ike ịhapụ ịnweta ohere nchekwa n'ime ngwa ngwa. Iji mee nke a, kpatụ isi atọ (isi aka nri elu) wee họrọ "Gosi nchekwa ebe obibi".
Ugbu a, gaa na njikwa faili faili site na ịpị na bọtịnụ atọ site na aka ekpe n'elu ma ọ bụ na-eme swipe n'aka ekpe gaa n'aka nri. Họrọ otu ihe na aha ekwentị gị.
N'ime ndepụta ndekọ nke ga-emeghe, chọta faịlụ VCF a depụtaghachiri na ngwaọrụ gị ma pịa ya. A ga-ebubata ndị ana-akpọ n'ime akwụkwọ adreesị gị, tinye ya na akaụntụ Google gị.
Dị ka ị nwere ike ịhụ, n'adịghị ka nhọrọ naanị ịbubata kọntaktị site na kaadị SIM, ịnwere ike ịchekwa ha site na email ọ bụla na Google na ụzọ abụọ - ozugbo site na ọrụ ma ọ bụ site na faịlụ data pụrụ iche.
N'ụzọ dị mwute, na iPhone, usoro a kọwara n'elu agaghị arụ ọrụ, ihe kpatara ya bụ njedebe nke iOS. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị bubata kọntaktị na Gmail site na kọmputa, wee banye na akaụntụ ahụ n'otu ngwaọrụ mkpanaka gị, ị ga-enwekwa ike ịnweta ozi dị mkpa.
A tụlere echiche a maka usoro ịchekwa kọntaktị na akaụntụ Google gị zuru oke. Anyị kọwapụtara ihe ngwọta niile a ga-edozi nsogbu a. Kedu onye ị ga-ahọrọ bụ gị. Ihe bụ isi bụ na ugbu a, ị ghaghị ịhapụ data a dị mkpa mgbe niile ma nwee ohere ịnweta ya.